U Aung Kyi Thein (USDP) Interview – Candidate Voice – Election Info Desk (NEI) | National Enlightenment Institute (NEI)
Public & Candidate Voice
Public Service Engagement -PSE Interview
Professionalism - Inclusiveness - Integrity
Upgrade Knowledge , Widen Space and Promote Society
U Aung Kyi Thein (USDP) Interview – Candidate Voice – Election Info Desk (NEI)
“ကျွန်တော်တို့ ပါတီက ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကိုယ်ပဲ ချမှတ် ထားတယ်။ အခုလက််ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေရော ၊ အရင်ကိုယ်လုပ် ထားတဲ့ အခြေအနေ တွေရော ၊ ဒါတွေ သုံးသပ် ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ့နော် တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ၊ ဥပမာ ဖက်ဒရယ် ဖက်ဒရယ်လို့ အော်နေကြတယ် ၊ ဒီပုဒ်မ (၂၆၁) ကို စပြီး ပြင်ပေး လိုက်ရင် ဒါကသူ့ရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုက သူ့ဟာသူ ပေါ်သွားလိမ့်မယ်”
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်။
“ကျွန်တော်တို့ ပါတီက ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကိုယ်ပဲ ချမှတ် ထားတယ်။ အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေရော ၊ အရင်ကိုယ်လုပ် ထားတဲ့ အခြေအနေ တွေရော ၊ ဒါတွေ သုံးသပ် ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ့နော် တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ၊ ဥပမာ ဖက်ဒရယ် ဖက်ဒရယ်လို့ အော်နေကြတယ် ၊ ဒီပုဒ်မ (၂၆၁) ကို စပြီး ပြင်ပေး လိုက်ရင် ဒါကသူ့ရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုက သူ့ဟာသူ ပေါ်သွားလိမ့်မယ်”
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်။
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/bSGH17unGlg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
National Enlightenment Institute
No.14, Kyaik Thanlan Pagoda Street,
Shwe Taung Quarter, Mawlamyine, Mon State, Myanmar.
© 2015-2022 National Enlightenment Institute, Myanmar. All rights reserved. Web Design by NetScriper
If you have any questions or problems , you can contact with +95-57-21249